AMISOM oo Beenisay in Askarteeda ka baxeyn Soomaaliya – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Saciid Deni oo Amray in La Dhaqan-geliyo Go’aanadii Xakamaynta Sicir-bararka
Al-Shabaab oo Ka Hadlay Qaraxa lala Eegtay Gudoomiye Siidii iyo Saraakiisha Danab
Faah-faahin:-Qarax Lala Eegtay Gudoomiye Siidii iyo Saraakiisha Danab
Howlgalo Dad Lagu Soo Qabqabtay Oo Ka Dhacay Deegaano Ka tirsan Hiiraan
Masuul Dowladeed Oo Ka Badbaaday Qarax Ka Dhacay Muqdisho
Al-shabaab Oo Weeraray Saldhig Ay Ku Sugnaayeen Ciidanka Kenya
Ra’iisul Wasaare Rooble Oo Booqday Qaar Ka Mid Ah Xarumaha Wasaaradaha Dalka
Ciidanka Dowladda Oo Howlgalo Ka Fuliyay Deegaano Hostaga Jamaame
AMISOM oo Beenisay in Askarteeda ka baxeyn Soomaaliya
Howlgalka Midowga Africa ee Somalia magaciisana loo gaabiyo Amisom ayaa beeninyey in ciidamadiisa ay ka baxayaan saldhigyo ay ku leeyihiin gudaha dalka Somalia, waxa uuna sheegay inay wadaan dhaqdhaqaaqyo dalka looga saarayo Al Shabaab.
Howlgalka Amisom ayaa sheegay inuu joogteynayo taageerada uu siinayo dowladda Somalia si ay kaga adkaato Al Shabaab islamarkaana shacabka Somaliyeed looga badbaadiyo dhimasha kasoo gaarto weerarada qaraxyada u badan ee Al Shabaab.
“Ciidamada AMISOM kama baxayaan saldhigyadooda, laakiin waaxyaha ayaa si istiraatiji ah u la jaanqaadayaan ciidamadooda si ay u ilaaliyaan dadka Soomaaliyeed, ayna u dhibaateeyaan al-Shabaab, iyagoo u diidayo xorriyad ay dhaqadhaqaaq ku sameyso” ayaa lagu yiri war-murtiyeed kasoo baxay Amisom.
Qoraalkan ayaa kusoo aadayo iyadoo ciidamada difaaca Kenya ee xubinta ka ah Amisom ay isaga baxeen saldhigyo ay ku lahaayey qeybo kamid ah gobolka Gedo ee dowlad goboleedka Jubbaland.
Ciidamada difaaca Kenya ayaa dhawaan bilaabay ka bixitaankooda deegaanka Busar oo ay Al Shabab kala wareegeen 100-kii Maalmood ee ugu horeysay howlgalkooda Somalia waxa ayna u aheed saldhig weyn.
Marka laga soo tago Busar ciidamada difaaca Kenya ee qeybta ah howlgalka Amisom waxa ay isaga baxeen deegaano iyo degmooyin kale oo ka tirsan gobolka Gedo sida- Bardere, El-Adde iyo Faxfax-dhuun, balse Amisom waxa ay talaabadaas ku tilmaamtay xeelad Military.